‘पुरुष वे,श्या’ बनेपछि
Homeबिबिध‘पुरुष वे,श्या’ बनेपछि
April 12, 2021 desk2बिबिध
भारतको बेंगलुरुमा कोभिड लकडाउनका कारण जागिर खुस्केपछि एक व्यक्ति गोप्य रूपमा पुरुष वेश्या बनेका छन् ।
उनको यो धन्धा थाहा पाएपछि पत्नीले पारपाचुकेका लागि निवेदन दिएकी छन् ।
बेंगलुरु प्रहरीको वनिता सहायवाणी अर्थात् महिलाको हेल्पलाइनले हस्तक्षेप गरेर पतिपत्नीलाई धेरैपटक परामर्श दिएको भए पनि यस जोडीले मान्दै मानेन र पारस्परिक सहमतिका आधारमा छुट्टिन लागेका छन् ।
भावेश र स्मृति (दुवैको नाम परिवर्तन) ले सन् २०१७ मा पहिलोपटक भेटेर प्रेममा परेपछि सन् २०१९ मा विवाह गरेका थिए । कोभिड आएपछि भावेशको जागिर गयो र उनी अन्य अवसरको खोजीमा लागे ।
केही महिनापछि पत्नीले अनौठो व्यवहार देख्न थालिन् किनकि पति भावेश ल्यापटप र मोबाइल फोनमा निकै व्यस्त हुन थाले । त्यसपछि उनी फुत्त हराउने र कहाँ गएको भनी पत्नीलाई नबताउने गर्न थाले ।
शंका लागेपछि नोभेम्बर महिनामा स्मृतिले आफ्नो भाइलाई भावेशको ल्यापटप खोल्न लगाइन्। ल्यापटपमा नग्न तस्वीरहरू भेटिए ।
‘उनले सिक्रेट फोल्डरमा पतिका नग्न तस्वीर र अर्धनग्न महिलाका सेल्फीहरू भेटिन् । पति त घन्टाको तीन हजारदेखि पाँच हजार भारु लिने पुरुष वेश्या पो बनेछन् र शहरमा उनका थुप्रै ग्राहक रहेछन् भन्ने पत्नीले थाहा पाइन् ।
स्मृतिले पतिलाई ल्यापटपको तस्वीरको बारेमा सोध्दा म त्यो मान्छे हैन भने ।
पछि उनले साथीहरूसँग सल्लाह गरिन् अनि मल्लेश्वरम प्रहरी चौकीमा पनि खबर गरिन् ।
पछि परामर्शदाताको उपस्थितिमा पत्नीसँग कुराकानी गर्दा पतिले आफू पैसा लिएर यौनकर्म गर्ने व्यक्ति बनेको स्वीकार गरे । आफूलाई नयाँ धन्धा मन पर्न थालेको उनले बताए ।
तर पत्नीका लागि जिगोलोको पेशा त्याग्ने उनले बताएपनि पत्नीले सम्बन्धविच्छेद नै गर्ने निर्णय लिइन् ।
यस जोडीले शहरको एक अदालतमा पारपाचुकेका लागि निवेदन दिएको छ । एजेन्सी
माओवादी केन्द्र का चार सांसदलाई बर्खास्त
म,सानघाटमा ४० घण्टासम्म आएन श,व अन्त्येष्टिको पालो
कोरोनाका कारण थप २ सय १४ जनाको मृ,त्यु
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय १४ जनाको मृ,त्यु भएको छ । योसँगै कूल मृ,तकको संख्या ५ हजार २ सय १५ पुगेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार २४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । […]
प्रधानमन्त्रीको शपथमा ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट दर्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथका क्रममा ‘प्रतिक्षा गर्छु’ नभनेर ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट दर्ता भएको छ । रिटमा रितपूर्वक पुनः शपथ गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । रिट सोमवार दर्ता भएर मंगलवारका लागि पेशी तोकिएको रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । […]
सक्रिय संक्रमित १ लाख १० हजार बढी, आज ७३ सय ६८ जनामा संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७ हजार ३ सय ६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर गरिएको १९ हजार ५ सय ३९ जनाको परीक्षणमा सो परिणाममा कोरोना पुष्टि भएको हो । जसमध्ये ७ हजार ३ सय १६ जनाको पीसीआर पोजेटिभ र […]
बिस्तारै कोरोना संक्रमण घट्ने
काठमाडौं – छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर केही मत्थर हुन थालेसँगै नेपालमा पनि त्यस्तै हुने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । संक्रमण करिब एक सातासम्म यथावत् रहने वा बढ्ने, त्यसपछि केही समय स्थिर रहेर ओरालो झर्न थाल्ने उनीहरूको अनुमान छ । विज्ञहरूका अनुसार गत वर्ष भारतमा संक्रमण […]
कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो रहेकाले दुई महिनापछि धकेलिएको नयाँ शैक्षिकसत्र आगामी असार १ गतेदेखि शुरू हुनेमा अन्योल देखिएको छ । गत वर्षको महामारीको प्रभावका आधारमा चालु शैक्षिकसत्र, २०७७ लाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याएर असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र, २०७८ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ परिस्थितबारे […]
तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् जेठ २ गते देखी जेठ ८ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २८ गते मंगलबारको राशिफल
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २७ गते सोमबारको राशिफल
तपाइको यो साता कति शूभः ? हेर्नुहोस् बैशाख २६ गते देखी ज्येष्ठ १ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २३ गते बिहिबारको राशिफल
गायक प्रकाश सपूतले जीते कोरोनालाई
गायक प्रकाश सपूत कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै आफु कोरोना संक्रमण मुक्त भएको जानकारी दिएका छन् । कोरोना संक्रमण मुक्त भएपछि उनले लेखेका छन्–‘नाता र भावनाले जोडिएका आफन्त [...]
कोरोना संक्रमणबाट ५८ जनाको मृ त्यु, ८६५९ मा संक्रमण पुष्टि
विशेष अधिवेशनका लागि सांसदहरुको कोरोना परीक्षण हुँदै
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने ५ पेयपदार्थ
गर्मी मौसममा चुकन्दरका ८ फाइदा
ट्रान्सपरेन्सीको प्रश्न : सरकारको अनुहारमा दाग छ, ऐना फुटाउने ?
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले आइतबार नेपाली कागजमा दुईपन्ने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ ।’ रोचक त के छ भने सरकारले अस्वीकार गर्ने बताएको ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी इन्डेक्समा नेपाललाई केही सकारात्मकरुपमा समेत प्रस्तुत […]
‘नेकपा फुट्दा देश बर्बाद हुँदैन, सरकार ढल्यो भने अर्को बन्छ’
काठमाडौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको सोही पार्टीकै महासचिव विष्णु पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा भनिसकेका छन् । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बढेको दूरी पार्टी विभाजनसम्मै पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेकपाभित्र देखिन्छ । विभाजनको खतराबाट टरेको आँकलन […]
रघुजी पन्तको प्रश्न : भारतीय सेनाका प्रमुख बिपिन राउत हुन् कि नरवणे ?
काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए रघुजी पन्त । पूर्वमन्त्रीसमेत भइसकेका उनी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । पन्त पूर्वपत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक र स्तम्भकारसमेत हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गर्न हुने÷नहुने कामहरुबारे पन्त अनुभवी नेता हुन् । […]
देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र दक्षिणपूर्व भूभाग नजिक रहेको न्युन चापीय प्रणालीको प्रभाव मौसममा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले शनिबार दिनभर देशका [...]
जंगलमा ब म भेटिएपछि डिस्पोजल टोली बोलाइयो, जाँच गर्दा सु’रक्षाकर्मी लाजले भुतुक्कै
जंगलमा ब म ह्याण्ड ग्रे नेड देखिएपछि त्यहाँ भएका मानिसहरु त्रसित बने । ब म योस्पोज गर्नको लागि डिस्पोजल टोली बोलाइयो । सु रक्षाकर्मी आवश्यक सबै उपकरण [...]
१४ बर्षिय किशोरले एकै दिन ४ बा’लिकालाई क रणी ग’रेपछि….
गुलरिया : १४ वर्षीय एक किशोरले बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा एकै दिन चार बालिकालाई कर णी ग रेको घटना सार्वजनिक भएको छ। ती किशोरबाट भाँडाकुटी खेलिरहेका ८, ६ [...]
२६ वर्षअघि भारत गएका भक्तबहादुरले घर नै बिर्सेपछि….
गुल्मी । ३३ वर्षको उमेरमा पूर्वी बीरगञ्जबाट मजदुरी गर्न भारत पुगेका भक्तबहादुर तामाङ नाम बताउने एक पुरुष अहिले बाँके जिल्लामा प्रहरीको शरणमा आइपुगेका छन् ।आफ्नो घर तथा [...]
शंकर पोखरेलको सरकार ढल्दै: अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदै
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तयारी गरेका छन् । [...]
अभिनेत्री शिल्पाका कारण प्रकाश सुवेदीका दुबै कार्यक्रम निलम्बन
नयाँ बन्जीको सफल परीक्षण, हिमाल हेर्दै जम्प गर्न पाइने
कलाकारले यसरी मनाए होली
पहिलो गासमै ढुंगा: किन आलोचित बन्यो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ ?
बेल्जियम पुगेपछि फेरिएको गरिमाको पहिरन
जेकी श्राफले नेपाली भादगाउँले टोपी लगाएको तस्वीर सोशल मिडियामा बन्यो निकै नै भाईरल
चक्रवातको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने
अरब सागरमा विकसित भइ फैलिने चक्रवातको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ । चक्रवातको प्रभावले नेपालका केहि स्थानहरुमा हावाहुरी र वर्षा हुने मौसमविद्ले पूर्वानुमान गरेका छन्। मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार चक्रवातको असर नेपालमा भोलि ९सोमवार० बेलुका देखि देखिन्छ । खास गरि यसले देशको पश्चिम भूभागमा प्रभावित पार्ने उनको […]
कोरोनाको मार खेपिरहेको भारतलाई चक्रवातको ख,तरा
गुजरात र महाराष्ट्र समेत पाँच राज्यमा ताऊ ते नामक चक्रवातको खतरा देखिएको छ । त्यहाँको मौसम विभागका अनुसार, तुफान गोवाको तटीय क्षेत्रमा आइसकेको छ । र त्यो द्रुत गतिमा गुजराततर्फ बढिरहेको छ । आगामी १२ घन्टामा यो भयंकर तुफानमा परिणत हुने सम्भावना पनि छ । तुफानका क्रममा वर्षा […]
यी हुन् सबैभन्दा बढी शून्यमा आउट हुने खेलाडी
एजेन्सी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १४ औँ सिजन आगामी अप्रिल ८ देखि शुरु हुँदैछ । यहाँ आईपीएलको त्यो रेकर्डको चर्चा गरिँदैछ जसको बारे कुनै पनि ब्याट्सम्यानले बताउन चाहँदैन । यो रकेर्ड सबैभन्दा बढी शून्यमा आउट हुने खेलाडीको बारेको हो । आईपीएलमा हालसम्म १३ जना खेलाडी १० या […]
टालियन सिरी ‘ए’ फुटबलमा शीर्ष स्थानको इन्टर मिलानले जित हात
काठमाडौं । इटालियन सिरी ‘ए’ फुटबलमा शीर्ष स्थानको इन्टर मिलानले जित हात पारेको छ । शनिवार राति भएको खेलमा इन्टरले बोलोग्नालाई १-० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। इन्टरको जितमा रोमेलु लुकाकुले निर्णायक गोल गरे । खेलको ३१ औं मिनेटमा लुकाकुले गोल गरेका थिए । जितसँगै इन्टरले २८ खेलमा […]
जितपछि खेलाडीहरुको नारा ‘केपी बा वी लभ यू’
काठमाडौं । नेपाल थ्री नेसन्स कप फुटबलको फाइनल हेर्न गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खेलाडीहरुले ‘केपी बा वी लभ यू’ भन्दै नारा लगाएका छन् । सोमवारको फाइनल खेलमा च्याम्पियन बनेपछि सामूहिक तस्वीर खिचाउने क्रममा खेलाडीहरुले त्यस्तो नारा लगाएका हुन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा सोमवार भएको फाइनलमा चिरपरिचित […]